အိုးအိမ်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူမြောက်ဘက်တွင်အလုပ်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
မြောက်ဘက်မှာတော့နေရာတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကလိုအပ်သည်။ အလုံအလောက်ကျွမ်းကျင်သူများကရိုးရှင်းစွာမရှိပါ။ ဒါကြောင့်လုံးဝပြဿနာများမြောက်ဘက်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အိုးအိမ်ကိုရှာပါ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ကဘာလဲ။ သငျသညျသကျဆိုငျရာက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဘာမှမတှေ့ရရန်သေချာစေပါ။ သင်တို့သည်လည်းရပ်ရွာထဲတွင်သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တူညီသောအလုပ်အကိုင်စင်တာယူဆ။ သူတို့ဟာအမြဲမြောက်ဘက်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်သွားဖို့လိုမယ့်အလုပ်ရှိသည်။ Plus အားကြောင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအကြိုးခံစားခှငျ့ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မြောက်ပိုင်းကအမြဲလုပ်သားများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
Прежде, чем рвануть на Север, надо хорошенько разобраться, куда именно. Север-то большой. Кроме того, основная загвоздка с жильм! Часто получается так, что для трудоустройства необходима регистрация (временная или даже постоянная) . А е получить не так уж легко. Попробуйте с кем-нибудь из северян познакомиться, пообщаться. Но шансы невелики. Не советую устраиваться куда-нибудь к частнику. Устроиться легче, но вот своевременность оплаты труда, да и сам факт оплаты — под большим вопросом! Наконец, подумайте и о здоровье. Можно испортить так, что и высокая северная зарплата будет не в радость.
မြောက်အမေရိက-ကြမ်းပြင်မသာချမ်းအေး, ဒါပေမယ့်လည်းမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်။ မြောက်ဘက်မှာနေထိုင်ရန်အသုံးပြုရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ခက်ခဲမှအဓိကအားကြောင့်။ နှင့်အလုပ်ကဖုန်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကြော်ငြာခေါ်နေရောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်မည်သို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်ယူခဲ့တယ်။ သင့်ရဲ့ muzh trucker? ထိုကဲ့သို့သောအထူးကုနေရာတိုင်းလိုအပ်နေပါသည်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်, ငါထင်နှင့်အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးကိုအလုပ်ရှာတွေ့မှ။
Posted in, ပြောင်းလဲမှုနှင့်ရှာဖွေရေးအလုပ်
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,275 စက္ကန့်ကျော် Generate ။